Ramla Ali: Waa tuma gabadha Soomaaliya ku mataleysa tartanka Feerka Olimbikada? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ramla Ali: Waa tuma gabadha Soomaaliya ku mataleysa tartanka Feerka Olimbikada?
Gabadha Soomaaliya ku meteleysa tartanka feerka ee Olimpikada, Ramla Cali ayaa saacadaha soo socdo la feertami doonto gabadh u dhalatay dalka Romania oo lagu magacaabo Maria Claudia.
Feerkooda ayaa noqonaya kii 16-aad ee tartankan.
Ramla Cali oo ah gabadh Soomaali ayaa mar kale taariikh u sameynaysa dalkeeda, iyadoo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeedda Soomaaliya ee u tartanta ciyaaraha feerka ee Olimbikada.
Sanadkii 2017 ayay aheyd markii Ramla ay ku guuleystayb tartanka feerka, waxay noqontay gabadhii ugu horreysay ee Muslim ah eek u guuleystay feer dalka Britain.
Wixii ka dambeeyay guushaas waxay go’aansatay in Soomaaliya ay ku matasho tartanka Olimbikada gaar ahaan feerka.
Taariikhda Ramla Cali
Ramla waxay soo garaaday haween badan oo dalal kala duwan u dhashay, Sida Mareykanka.
Hadda Ramla waxay dooneysay in Soomaaliya ay ku matasho tartamada caalamiga ah ee Feerka, waxaana ka mid ah midka hadda ka socdo dalka Japan, ee dib loo soo dhigay sannadkii 2020, ka dib xanuunka Covid-19 cabsidiisa.
Previous articleHa’yadda Caymiska Somaliland oo Amaawiir Culus dul Dhigtay Gaadiidka dalka oo dhan
Next articleBAMAKO — Ninka lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu dilo hoggaamiyaha militariga ah ee Mali Assimi Goita, ayaa xabsiga ku geeriyooday,